Dadaallada Horumarineed Ee Maayirka Caasimada Hargeisa…Saxafi..Hamse Jirde. |
Dadaallada Horumarineed Ee Maayirka Caasimada Hargeisa…Saxafi..Hamse Jirde.
Bulshadda Somaliland ayaa si weyn u hadal haysa waxqabadka balaadhan ee dawlada hoose ee caasimada hargaysa ay ku talaabsatay Tan iyo markii uu la wareegay xilka ama maamulka dawlada hoose hargaysa maayir Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelco.
Waxaanu ku guulaystay inuu waxka qabto isla markaana uu dib u dhis balaadhan iyo dayactir uu ku sameeyo wadooyin badan oo ay ka mid yihiin wadadooyinka halbawlaha ah ee caasimada oo burbur xoogan ay ka muuqdeen kuwaas oo marka xiliyada ay roobabku bilaabmaan ay caqabad badan ay kala kulmi jireen gaadiidka iyo shacabku,Sidoo kale waxaa uu maayiir Soltelco uu wax ka qabtay oo uu dayac tiray ililadihii biyo mareenada ahaa ee ay qashinku buuxiyay.
Waxay bulshada Somaliland ka war haysaa oo aanay hilmaami Karin waxqabadka iyo horumarka Maayir Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelco ka hir galiyay guud ahaan wadooyinka Caasimada Hargaysa waxaana kamida wadooyinka aaadka u mihiimka ah ee uu waxka qabtay Maayir Soltelco Jidka isku gudubka ah ee iskaga talaaba sadexda Degmo ee Ibraahim koodbuur, 26-june Iyo Gacan libaax oo si wayn u sahlay isku socodka magaalada gudaheeda. Waxyaabaaha kale ee dawlada hoose hargaysa ayku guulaysatay waxaa kamid ah buundooyin iyo biriijyo oo ay kamid yihiin biriijka boqol jire buundada maxamed mooge buundada xaafada macalin haaruun iyo buundada degmada axmed dhagax.
Wadooyinka tirada badan ee ay golaha deeganka caasimada hargaysa dhiseen ayaa waxay ay noqdeen kuwo ay shacabku si wayn ugu diirsadeen.
Horumarka way oo maayir Soltelco Iyo Golihiisa deegaanku ay soo kordhiyeen waxaa kamida gaadiidka Dab-demiska oo baahi wayn loo qabay maadaama oo ay magaaladu noqotay mid aad u baladhan oo mashquul badan sidaa darteed ayaa ay muhiim u noqotay in la aas aaso ciidanka dab damiska oo ay dowlada hoosena ka caawiso adeego badan oo ay u bahan yihiin.
Maayir Soltelco ayaa waxaa lagu lagu tilmaami karaa masuul dalka wax badan kusoo kordhiyay mudii uu xilka Maaayirnimada uu hayay Isla markaana waxaa uu dedaal dheeraada uu u galay sidii ay bulshadiisu u heli lahayd wadooyin laamiyaha ah oo dhisan.
Geesta kale waxaa aan iyaguna ka maqnayn waxqabadka iyo horumarka balaadhan ee maayir Soltelco dib u dhiska iyo qurxinta uu ka hirgaliyay Caasimada Somaliland Ee Hargaysa iyo samaynta adeegayada gaadiidka kala haga ee ishaarooyinka iyo hirgalinta wadooyin fara badan.
Lasoco Qormooyin Kale Oo Aanu Kusoo Bandhigayno Waxqabadka Mayirka Caasimada Hargaysa
Wariye, Xamse Jirde Axmed.